Ku biir Barnaamijka Iskuxiran Fyrebox
Waxaan bixinaa 30% komishanka soo noqnoqda dhamaan iibka la soo saaray, nolosha macaamiisha, iyada oo loo marayo xiriirkaaga gaarka ah ee xiriirkaaga (laga heli karo boggaaga koontada).
Barnaamijka Iskuxirka Fyrebox wuxuu u oggolaanayaa xubnayaasha inay sare ugu qaadaan qiimeynaheenna suugaanta ganacsiyada yar-yar. In ka badan 100,000 oo suuqleyaal ah ayaa adeegsaday Fyrebox oo hadda waxaa lagu heli karaa 39 luqadood (waxaan gaari doonaa 50 illaa bartamaha 2019). Su'aalahayagu waxay soo saareen in ka badan 500,000 oo tilmaam oo loogu talagalay adeegsadayaashayada iyo horumarin ku saabsan ka qeybqaadashada 100,000s ee websaydhada.
Maxaad Fyrebox ula wadaagtaa dhageystayaashaada?
Fyrebox waxay bixisaa qaab sahlan oo lagu abuuro kedis si loo abuuro tilmaamo, waxbarid ama si fudud loogu hawlgeliyo dhageystayaasha internetka. Waa kuwan qaar ka mid ah astaamaha Fyrebox ay ku deeqi karto:
Aan xadidnayn ayaa horseeda dhammaan qorshayaasha la bixiyo
Su'aalaha jawaab celinta mobilada
Qalabka wax ku ool ah ee dhammaan Nidaamyada Maareynta Maaddada
Is dhexgalka Zapier
Lacag bixinta waxaa lagu sameyn doonaa koontada Paypal ee kor ku taal 2da bil kasta haddii xaddiga guddiyada ay ka badan tahay $ 25 doolar (ama u dhiganta)Waad gali kartaa waqtiga dhabta ah ee guddigaada oo lacagtaada waxaa lagu bixin doonaa 2da bil kasta si toos ah akoonkaaga lacagta (bixinta khidmadahaaga oo ka badan $ 25)
Sida loogu biiro Barnaamijka Iskuxiran Fyrebox
Step #1: Noqo isticmaale Fyrebox oo iska qor qorshaha caadiga ah. Xubinnimada ma'aha shuruud, laakiin kuwa raacsan ee sida dhabta ah u adeegsada Fyrebox way ku guuleystaan. Haddii aad aamminsan tahay inaad ku guuleysan doontid kobcinta Fyrebox bilaa xisaab la'aan ah, fadlan la soo xiriir.
Step #2: Booqo boggaaga koontada oo guji tabka "Gudbinta". Waxaad markaa heli doontaa xiriiriyaha aad la wadaagi karto dhagaystayaashaada.
Step #3: La wadaag Xiriirkaaga Xiriiriyaha